Goho Guru muTranscarpathia, Ukraine
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Gungano remuNyzhnya Apsha, muUkraine, 2012
JESU akagara ataura kuti vateveri vake vaizova negoho rakakura munguva ino yemugumo. (Mat. 9:37; 24:14) Ona kuti mashoko ake akazadzika sei zvinoshamisa mune imwe nharaunda yeTranscarpathia, muUkraine. Mumataundi matatu chete ari pedyo nepedyo munzvimbo iyoyo, mune ungano 50 uye vaparidzi vanopfuura 5 400. * Pavanhu vese vari mumataundi aya, munhu mumwe chete pavanhu vana vega vega Chapupu chaJehovha.
Vanhu vari mundima iyi vakaita sei? “Vanhu vekuno vanoremekedza Bhaibheri, vanokoshesa kuti vanhu vabatwe zvakanaka, vane mhuri dzakanyatsobatana uye vanoedza nemwoyo wese kubatsirana,” inodaro imwe hama inogara ikoko inonzi Vasile. Inowedzera kuti: “Hapasi pese pavanobvumirana nezvatinotenda. Asi paunovaratidza chimwe chinhu kubva muBhaibheri, vanonyatsoteerera.”
Ichokwadi kuti hama nehanzvadzi dzedu dzinova nematambudziko asingawanzosangani nevamwe padzinoparidza munharaunda ine vaparidzi vakawanda kudaro. Semuenzaniso, imwe ungano ine vaparidzi 134 asi ndima yayo inongova nedzimba 50 chete! Vaparidzi vanoita sei pakadaro?
Hama nehanzvadzi dzakawanda dzinozvipira kunoparidza munzvimbo dzinodiwa vaparidzi vakawanda. “Muparidzi mumwe chete anongova nedzimba mbiri dzekuparidzira,” inodaro hama inonzi Ionash yava nemakore 90. “Ndinoparidza mumusha wandinogara. Ndaimboendawo kunoparidza kundima isina ungano iri kure nemakiromita 160, uko kwandaiparidza mumutauro wechiHungarian asi mazuva ano utano hwangu hauchandibvumiri kuita izvozvo.” Vaparidzi vanofanira kuzvipira kuti vabatsire kune dzimwe ndima. Ionash anoti, “Kuti ndibate chitima, ndaimuka na4:00 dzemangwanani uye ndaiparidza kusvika na6:00 dzemanheru chitima pachainge chava kudzoka kumba. Ndaiita izvozvo kaviri kana katatu pavhiki.” Anoona sekuti akashandira zviripo here? Anoti, “Ndakawana mufaro wakakura pakuita ushumiri ihwohwo. Ndakabatsira imwe mhuri yaigara munzvimbo isina Zvapupu kuti idzidze chokwadi.”
Zvinonzwisisika kuti haasi munhu wese ari muungano dzemunharaunda iyi anokwanisa kuenda kunzvimbo dziri kure. Asi munhu wese, kusanganisira vaparidzi vakura, anoedza kunyatsoshanda ndima yeungano yavo. Nemhaka yaizvozvo, muna 2017, nhamba yevanhu vakapinda Chirangaridzo mumataundi matatu aya yakapeta nhamba yevaparidzi nekanenge kaviri, kureva hafu yevanhu vese vari mumataundi aya. Pasina mubvunzo, chero kwatingashumira tiri, kuchiine “zvizhinji zvokuita mubasa raShe.”​—1 VaK. 15:58.
^ ndima 2 Mazita emataundi acho anoti, Hlybokyy Potik, Serednye Vodyane, uye Nyzhnya Apsha.